रुसले कोरोनाभाइरसको पहिलो भ्याक्सिन बनाएको हो त ? यस्तो भन्छ्न बैज्ञानिक – – Life Nepali
रुसले कोरोनाभाइरसको पहिलो भ्याक्सिन बनाएको हो त ? यस्तो भन्छ्न बैज्ञानिक –
नोभेल कोरोनाभाइरसले अहिलेसम्म विश्वमा एक करोड २८ लाख बढीलाई संक्रमित पारिसकेको छ र यो भाइरसका कारण निम्तिएको रोग कोभिड–१९ का कारण करिब पाँच लाख ५५ हजारको मृ’त्यु भइसकेको छ । यो भाइरसको करिब सात महिना लामो प्र’कोपपछि रुसले आफ्ना वैज्ञानिकले कोरोनाभाइरसको पहिलो भ्याक्सिन बनाएको दा’बी गरेको छ ।
उनले भने, ‘मस्कोस्थित सरकारी मेडिकल युनिभर्सिटी सेचेनोफले यो ट्रायल गरेको हो र यो भ्याक्सिन मानिसमा सुरक्षित छ ।
जुन व्यक्तिमा भ्याक्सिन प्रयोग गरिएको छ, उनीहरुको एक समूहलाई १५ जुलाई र दोस्रो समूहलाई २० जुलाईमा अस्पतालबाट छुट्टी दिइनेछ ।’ युनिभर्सिटीले १८ जूनमा रुसको गेमली इन्स्टिच्युट अफ एपिडेमियोलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजीद्वारा निर्मित यो भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरेको थियो ।
सेचेनोफ युनिभिर्सिटीका एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी एलेक्जेन्डर लुकाशेवका अनुसार भ्याक्सिन ट्रायलको यो चरणको उद्देश्य भ्याक्सिन मानिसहरुका लागि सुरक्षित छ, छैन भनेर सुनिश्चित गर्नु थियो । उनले ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा भएको र सुरक्षित भएको बताएका छन् । लुकाशेवले भ्याक्सिनको व्यापक उत्पादनका लागि के कस्ता तयारी गर्नुपर्ने हो त्यसको रणनीति तयार भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
वादिम तरासोवले भने, ‘महामारीका समयमा सेचेनोफ युनिभर्सिटीले एक शैक्षिक संस्थाको रुपमा मात्रे नभई वैज्ञानिक र प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा पनि काम गरेको छ । यो युनिभर्सिटी औषधीजस्तो महत्वपूर्ण र ज’टिल वस्तुको उत्पादनमा पनि सक्षम भएको छ ।’ संसारभरी ७० लाख मानिसहरु कोरोनाभाइरसद्वारा संक्रमित भएपछि पूर्ण रुपमा निको भइसकेका छन् ।
Previous खुसिको खबर – नेपालमा साझा बस चलाउन सुरु गर्ने मिति तोकियो !
Next अब नेपालका प्रत्येक वडामा फ्री वाइफाइ उपलब्ध हुने ! वाइफाइ बारे यस्तो भन्छ नेपाल टेलिकम –